> Resource> YouTube> YouTube trimmer: Olee otú ewepụtụ YouTube Videos
Get ụfọdụ ịtụnanya YouTube videos, ma na-achọ ewepụtụ si ụfọdụ akụkụ unu adịghị mkpa? E nwere ọtụtụ ngwa aka ewepụtụ a video si ogologo ala, gụnyere YouTube ọhụrụ web-dabeere video nchịkọta akụkọ dị ka aka-na ọrụ. Ma ihe ma ọ bụrụ na ị chọrọ a eluigwe na ala video trimmer obibi niile ụdị video faịlụ kama dị nnọọ gị onwe gị uploaded mkpachị?
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) abịa a kemfe na mfe iji edezi ngwa na i nwere ike iji ewepụtụ na mado ihe ọ bụla video ị ga-esi ike ọhụrụ na-arụ ọrụ. Ọ bụ a mara mma n'ụzọ kwụ ọtọ omume, na-akwado ndị niile YouTube SD ma ọ bụ HD video na FLV, WebM, HTML5 usoro. N'okpuru na-egosi otú ị pụrụ ewepụtụ YouTube faịlụ na ihe ọ bụla ọzọ faịlụ ọsọ ọsọ na mfe.
Rịba ama: Nke a YouTube cropper bụ cross-n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko ịmụta Mac version: Wondershare Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac) na-agbaso otu nzọụkwụ dị ka belows (Windows screenshots).
1 Import YouTube videos ị chọrọ ewepụtụ
Mgbe ị arụnyere a YouTube trimmer mbu, dọrọ gị YouTube faịlụ ka usoro ihe omume. Ha Aga-egosi na ekpe ebi ndụ. Alternatively, pịa "Import" ịchọta YouTube faịlụ na ị chọrọ ewepụtụ na popup window. Mgbe faịlụ niile kwajuru, ikpuru na dobe a video ị chọrọ ewepụtụ ka Video usoro iheomume. Rịba ama na niile mbụ YouTube faịlụ a ga-emebibeghị. Ị naanị ewepụtụ a YouTube video na ike a ọhụrụ faịlụ.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ị chọrọ a YouTube Ripper na-ewetara gị chọrọ videos jidesie gị ike mbanye, na-agbalị a oru oma ma free YouTube Downloader.
2 ewepụtụ YouTube video on usoro iheomume
Atụmatụ: Iji nyere gị aka ngwa ngwa ga-esi gị chọrọ mkpachị, a YouTube trimmer na-enyekwa a kemfe Scene Detection atụmatụ. Nke a bụ karịsịa bara uru n'ihi na ọ na-akpaghị aka nāwa osisi nọ dị iche iche Mpaghara, si otú i nwere ike ịhụ gị lekwasịrị Mpaghara enweghị ihe ọ bụla mgbalị. Iji mee nke a, nanị nri pịa clip na ekpe item tree ma họrọ "Scene Detection". Na window na-egosi, see "Ịchọpụta" wepụ niile dị iche iche Mpaghara na pịa "Mee".
3 Zọpụta trimmed YouTube video
Ke akpatre, dị nnọọ pịa "Mepụta" button mbupụ a YouTube faịlụ. Na mmapụta window, gaa na "YouTube" taabụ, jupụta gị ozi akaụntụ, Atiya, aha, nkọwa, wdg Ma mgbe ahụ kụrụ "Mepụta" bulite ya kpọmkwem site a ngwa.
Rịba ama na ị nwekwara ike ịzọpụta gị e kere eke a ọkọlọtọ ma ọ bụ HD video usoro dị AVI, WMV, MOV, MP4 na-egwu conveniently na kọmputa gị ma ọ bụ obere ngwaọrụ. -Ere Ọkụ trimmed YouTube video ka DVD video-dịnụ, dị nnọọ ka e gosiri na n'okpuru screenshot.
Cheta na: Nke a YouTube trimmer-enyere gị aka kewaa na ewepụtụ na-achọghị akụkụ nke gị mbụ video dị mfe clicks, ma ike n'ịwa multi-videos. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-amasị ewepụtụ a nnukwu video iji nweta ọtụtụ obere mkpachị, ị kwesịrị ị na-ewepụtụ na-azọpụta onye ọ bụla trimmed akụkụ otu otu iji nweta ha iche iche. E wezụga video trimming, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) nakwa na-enye gị na ndị ọzọ video bara uru ngwá ọrụ dị ka merging, n'usoro n'usoro, na-agbakwunye pụrụ iche utịp, kpatụ ìhè, iche, itinye mara mma ikwu n'ụzọ n'etiti mkpachị, na ndị ọzọ. Obiọma na-ezo nkọwa ndị ọzọ na User Guide.
Ekiri ihe a video nkuzi: